Ukuphupha i-eczema ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Xa ugqirha ethetha malunga nerhashalala, ubhekisa kutshintsho olwenzakalisayo kumphezulu wolusu. Oku kuhlala kubonakala njengokurhawuzelela okungathandekiyo, ukuba bomvu kwesikhumba namadyungudyungu. Ukuba i-eczema iba sisifo esinganyangekiyo, ulusu lubonakala lomile, lujijekile, kwaye ngamanye amaxesha luye lwaphuka kwaye lurhabaxa.
I-eczema sesinye sezifo zolusu ezixhaphakileyo kwaye, ngokuxhomekeke kubukhali bayo, ayonwabanga kwisigulana. Oonobangela besi sifo solusu bahluke kakhulu kwaye ngamanye amaxesha abanakucaciswa gca. Oko kubizwa ngokuba yi-eczema kuqhelekile kwaye kunokubakho ngenxa yokuvezwa kwezinto zangaphandle, ezinje ngeekhemikhali okanye ukutya, ukuba ngaba awunazinto zichasene nazo. Nangona kunjalo, kwimeko ye-eczema engapheliyo, oko kukuthi, ngaphakathi kubangelwa, kukho imeko yemfuza. I-Neurodermatitis, ekwabizwa ngokuba yi "atopic eczema", yenye yezona ndawo zingaziwayo kwi-eczema.
Izifo zolusu zolu hlobo zihlala zinokunyangwa sisigulana uqobo, umzekelo, ngamafutha okanye izinto zokuthambisa. Ngokubanzi, ukuhlala esibhedlele akukho mfuneko; Endaweni yoko ugqirha wosapho okanye ugqirha wesikhumba uya kukuyalela tinctures ezifanelekileyo.
I-eczema nayo ingasichaphazela el mundo yamaphupha. Utolika njani lo mfanekiso uphupha ngokuchazwa kwephupha, sichaza apha ngezantsi.
1 Uphawu lwephupha «eczema» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «eczema» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «eczema» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «eczema» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba umntu uphupha i-eczema, oku kunokuba nesizathu sayo kwisifo solusu sokwenyani, nangona kunjalo singenayo intsingiselo enzulu kwinqanaba lokulala. Ibonisa kuphela ukuba umntu ukhathazekile ngokwenzekayo kulusu lomntu kwaye oku kungasichaphazela ngokungathethekiyo kubomi bethu bokuvuka.
Ngapha koko, ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kubona uphawu lwephupha "i-eczema" njengophawu lweli phupha ngoku ixesha elichanekileyo uze kuphumeza iiprojekthi ezicwangcisiweyo okanye izicwangciso ezindala.
Nangona kunjalo, oku kusebenza kuphela ukuba i-eczema ibonwa komnye umntu. Kwaye nalapha, ngaphandle kwethemba eliqinisekileyo, amanyathelo anyanzelekileyo ayimfuneko, kuba uya kuphumelela kuphela xa usiya ekuphumezeni izicwangciso ngokuzingisa nangomzamo, ubonise umonde, kwaye ungashukumi ngokukhawuleza ngenzondelelo engaboniyo.
Uphawu lwephupha «eczema» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, umfanekiso wephupha "eczema" ungqina ukuba imvakalelo yomntu ophuphayo inexabiso elingonelanga. Ngokukodwa xa i-eczema ichaphazela umzimba wakho, ukurhawuzelela nokukrwela, oku kubonisa ukuba awuhlali kakuhle nolusu lwakho kwaye ungathanda ukwahlukana nayo.
Kanye njengokuba ulusu lucatshukiswa ngumbala, kunjalo ke Ukucaphuka kananjalo ngaphakathi ephupheni. Unako nokuziqhelanisa noontanga bakho kuba unoluvo lokuba awungowakho okanye awufanelanga ekuhlaleni.
Yintoni eyacaphukisayo kwaye yacaphukisa ulusu okanye enye? Ngaba yayikukuziphatha okungacingeliyo kowasemzini, okanye ngaba waziphatha ngokungakhathali kunye nolwazelelelo kwaye engayinanzi imiqondiso yomzimba nomphefumlo? Yiva le mibuzo kube kanye kwaye mhlawumbi uya kuyibona enye okanye enye unxibelelwano lokwenyani phakathi kwehlabathi lamaphupha kunye nobomi benene bemihla ngemihla.
Uphawu lwephupha «eczema» - ukutolika kokomoya
Ukuba umntu uphupha i-eczema, olu phawu luphupha lubonisa ukuphazamiseka kutoliko lokomoya lokulala. Iinkqubo zokhuseloukuveza umntu kwizenzo zokuwela umda.